Apple Inokurumidza Inovandudza Kutambura muMacOS Yakakwira Sierra Kuratidzira Yakanyorwa Yakavanzika SSD Password Ndinobva mac
Semazuva ese, pese pese panotangwa vhezheni itsva yeanoshanda, zvishoma nezvishoma, zvidiki kana zvihombe zvikanganiso zvinowanikwa mukushanda kwavo. Pakangoburitswa iOS 11.0, vashandisi veOptlook vakawanikwa vasingakwanise kumisikidza maakaundi avo muApple app, nyaya yakagadziriswa svondo rapfuura neyekuvandudza. Ikozvino yave nguva yekuchinja kweMacOS Yakakwira Sierra. Mushambadzi Matheus Mariano aona njodzi iyo inobata chete yakavharidzirwa maSSD uye izvo zvakavezwa neiyo nyowani macOS High Sierra yekushandisa system, APFS.
Sezvatinogona kuona muvhidhiyo iri pamusoro, patinomisa dhiraivha muAPFS uye nekuwedzera password yekunyorera, iyo sisitimu inokurudzira kushandisa zano kuti ukwanise kuzvirangarira kana wakanganwa. Asi sekuona kwedu, kana tichida rubatsiro rwenzira iyi, pachinzvimbo chekuratidza zano rinodiwa kuti urangarire password, chii chinoratidzwa pasiwedhi pachayo.
Sezvandambotaura pamusoro, dambudziko rekuchengetedza, inongobata maSSD akaverengerwa, saka kana isiri yako, hazvikukanganisa zvachose. Izvo zvakare hazvikanganise michina yakaoma dhiraivha kana iyo inonzi Fusion Dhiraivhu, sezvo pasina imwe yeaya mamodheru inoenderana neiyo nyowani faira system, kunyangwe iyo yekupedzisira ichaita saizvozvo munguva pfupi, sekureva kwaApple mazuva mashoma apfuura.
Iko kukanganisa Izvo zvinoratidzwa chete kana isu tikashandisa Disk Utility kurangarira password yekunyorera, nekuti kana tichiita izvi tichishandisa mirairo kuburikidza neTerminal, mhedzisiro inoratidzwa ndeye zano uye kwete password sezvazvinoitika neDisk Utility. Pane ino chiitiko, Apple yanga ichikurumidza kuvhura inoenderana inoenderana kune macOS High Sierra iyo inogadzirisa iyi dambudziko rekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inokurumidza kugadzirisa kusagadzikana mune macOS High Sierra iyo yakaratidza password yeakavharidzirwa maSSD
Ivo vanofanirwa kuve vanongwarira zvakanyanya nemhando idzi dzekukundikana.
Zvikumbiro zvakati wandei zvine matambudziko ne macOS High Sierra uye APFS system
Maitiro ekudzima ekare mameseji kubva kuacOS Mail app